Istaraatiijiyad lagu abuurayo astaan ​​saddex-midab leh oo sawir leh | Abuurista khadka tooska ah
Rodrigo Santiago | | logos, dhowr
Waxaa jira xeelado dhowr ah oo aad waxtar u leh abuurista astaan ​​saddex-midab leh oo sawir ah. Tani waxay si gaar ah u xiiseyneysaa dhammaan kuwa naqshadeeyayaasha ah ee aan xirfad u lahayn sawir qaadista oo doonaya inay adeegsadaan xayawaanka ama sawir kasta oo kale oo leh shahaado adag oo adag ama dhab ah.
Waxaan u adeegsaneynaa sawir orso ah si aan u sameysano astaanteena, laakiin shax kasta oo kale ayaa la isticmaali karaa. Iyo waxa ugu horeeya ee aan sameyn doonno waa inaan ku masaxno asalka Photoshop. Si tan loo sameeyo, kaliya ku xulo asalka qalabka xulashada doorbidaya (lasso, sixir, iwm.) oo riix Dheeraad.
Marka xigta waa inaad sifeeysaa lakabka adigoo riixaya Amar / Ctrl + Alt + U kuna nuqul lakabka sawirka laba jeer.
Hadda, mid ka mid ah lakabyada la xushay, waa inaad tagtaa Sawirka / hagaajinta / marinka oo wax ka beddel marinka si aad u hesho lakab leh inta badan sawirka midab cad oo kaliya tusmooyinka madow.
Markaa waa inaad ku celcelisaa nidaamka lakabyada labaad iyo saddexaad laakiin yaraynta booska cad ee mid kasta oo ka mid ah leh.
Sawirka saddexaad waa inuu lahaado tusaalooyin cad oo kooban.
Marka tan la dhammeeyo, saddexda sawir waa in lagu keydiyaa faylal kala duwan oo leh asal hufan oo aan markaa u soo dhoofsan doonno Sawire. Tan iyo markii Fayl / Meel waxaan ku ridi doonaa sedexda sawir feylasha Sawirka iyada oo laga taxadirayo in si sax ah la isaga dul dhigo midba midka kale si tirada ay u dhigantaa. Ku dheji sawirro leh meel bannaan oo cad ka yar shaxanka dusha kuwa kuwa booskoodu yar yahay.
Marka lagu meeleeyo, waa inaad tagtaa liiska sare ee soo muuqan doona markaad sawirka u xulanayso Raadinta sawirka sida sawirka soo socda. Raadinta nooca ay tahay in la sameeyo waxay kuxirantahay nooca sawirka aad isticmaaleyso. Waxaa fiican inaad si fudud u tijaabiso illaa aad ka aragto midka natiijada ugu fiican siinaya.
Marka baafinta sawirka la sameeyo, waa inaad Ballaarin, laga bilaabo liiska kore. Sidan wax walbaa waa la saxi karaa.
Habkani waa mid aad u dhakhso badan oo wuxuu ku siinayaa nooca vektorka sawirka oo aad markaa dib u hagaajin karto sida aad rabto. Inkasta oo waxa ugu horeeya ee la sameeyo had iyo jeer la siiyo 3da sawir 3 midab oo kala duwan sida ka muuqata sawirka culeyska soo socda.
Marka natiijada dib loo hagaajiyo, waxaan horey u leenahay astaan ​​vectorized ah oo aan u isticmaali karno mashruuc kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Sida loo abuuro astaan ​​saddex-midab leh oo sawir ah
Waa wax badan oo nooc ah. Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Ku jawaab Miguelángel Carretero
Abuur sawir deg deg ah oo leh qaabab qaas ah Photoshop